DAAWO:Muxuu musharax Siciid Dheere kaga duwan yahay musharixiinta kale ee Puntland? – Puntlandtimes
GAROWE(P-TIMES)- Munaasibadani oo lagu daah furayey ololaha musharaxinimada madaxweynaha Puntland ee sanadka 2019 Gen. Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) oo kamid ah musharixiinta u taagan xilka madaxtinimada Puntland ayaa habeenkii xalay ahayd waxa ay ka dhacday Hoolka munaasibadaha iyo shirarka ee Eyl Palace Hotel oo ku yaala gudaha magaalada Garowe, waxaana munaasibadan kasoo qayb galay waxgarad, aqoon yahano, siyaasiyiin, xubno hore xilal uga soo qabtay Puntland, culimo awdiin, dhalin yaro, haween, qaar kamid ah saraakiisha ciidamada Puntland iyo qaybaha kala duwan ee bulshada. RIIX HALKAN OO KA DAAWO MUUQAALKA
Qaar kamid ah waxgaradkii, aqoon yahanadii iyo xubnihii kala duwanaa ee ka hadlay munaasibadaasi ayaa dhankooda si diiran u soo dhoweeyey musharaxnimada Gen. Siciid Dheere, waxaana ay sheegeen in uusan jirin haatan shakhsi kaga haboon Generalka talada iyo hanaanka dowladda Puntland.
General C/samad Cali Shire madaxweyne ku xigeenkii hore ee Puntland oo kamid ahaa shakhsiyaadkii kasoo qayb galay munaasibada musharax Siciid Dheere ayaa ku nuux nuuxsaday isbadalka uu Puntland u horseedi karo Gen. Dheere hadii uu noqdo madaxweynaha Puntland, waxaana uu xildhibaanada Baarlamaanka Puntland ugu baaqay in ay si hagar la’aan ugu deeqaan codkooda.
Gen. Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa ka sheekeeyey marxaladihii kala duwanaa ee ay soo martay Puntland iyo halgankii adkaa ee uu u soo maray dhismaha dowladd Soomaaliyeed oo dalka laga gaarta, waxaana uu shaaca ka qaaday Generalku in uusan ahayn shakhsi doonaya hanti iyo xil balse marxaladaha xiligani ka jira Puntland ay ku dhaliyeen in uu u soo istaago xilka madaxtinimada Puntland.
“Anigu ma ihi qof u socda in uu xoolo dhaqdo horta bal ogaada ma ihi wasiir doon qaar baa wasiir doonaya oo musharaxa ma ihi xoolo doon, waxaan isu taagay danta difaaca dalka, dadka iyo diinta”. Ayuu yiri Gen. Siciid Dheere mar uu ka hadlayey ujeedkiisa musharax.
Musharax madaxweyne Siciid Maxamed Xirsi (Siciid Dheere) ayaa dhanka kale waxa uu sheegay in uu wax badan ka qaban doono baahiyaha aasaasiga ah hadii uu madaxweyne ka noqdo Puntland, waxaana uu si gaar ah farta ugu fiiqay arimaha xoreynta iyo xaalada gobolka Sool oo uu sheegay in uu ka taagan yahay mowqif adag isla markaasna ay kow ka yihiin tiirarkiisa musharaxnimo dib u soo celinta gobolka Sool iyo difaaca deegaanada Puntland.
Arimaha diinta mar uu ka hadlayey ayuu sheegay in ay muhiim tahay in diinta lagu dhaqmo dadkana ay dantu ugu jirto in rabi kaligii la caabudo, waxaana uu kula dar daarmay shacabka in ay adkeeyaan xiriirka rabi iyo iyaga.